IBaroka iphinde yanenebula iChiefs futhi | Scrolla Izindaba
IBaroka iphinde yanenebula iChiefs futhi
Eminyakeni eyedlule, iBaroka FC bekuyiqembu elimise kabi iKaizer Chiefs, futhi baqhubekile nokuzwisa Amakhosi ubuhlungu njengoba ukugadla kuka-Evidence Makgopa kuqede amathuba okunqoba eChiefs ngoLwesine.
IKaizer Chiefs kanye neBaroka FC bambane ngo 1-1 emdlalweni we-DSTV Premiership ePeter Mokaba Stadium.
Iqembu lase-Limpopo liphinde lavimbela Amakhosi ukuthola isicoco ngonyaka owedlule emdlalweni wokugcina wesizini. Bashaya iChiefs ngaleyo ndlela badlulisela isicoco kuMamelodi Sundowns.
Ngisho nangezinsuku zabo zobumnandi, iBaroka ibihlale inika Amakhosi izinkinga futhi iqhubekile nokuthela usizi oluningi eqenjini.
Emdlalweni wangoLwesine, iKaizer Chiefs inqatshelwe obekubukeka njengephenalthi ecacile ekuqaleni kwesiwombe sokuqala. USamir Nurkovic ubebukeka edlaliswe kabi ebhokisini kodwa unompempe waqhubekisa umdlalo.
UBakgaga ba Mphahlele ujabulele iningi lokutholwa kwebhola esiwombeni sokuqala, kodwa amaphuzu ahlale engenamagoli kwaze kwayiwa ekhefini.
ULebogang Manyama uvulele Amakhosi indlela ngomzuzu wama-58, ngemuva kokudlula phambi kukanozinti weBaroka u-Ocarine Masuluke washaya igoli.
U-Itumeleng Khune ukhiphe unyawo ngesikhathi esindisa i-free kick ebivela ngaphandle kwebhokisi ukuze anqabele uTshidiso Patjie ithuba lokushaya igoli.
Kodwa-ke, ngomzuzu wama-81, u-Itumeleng Khune akukho abengakwenza ngesikhathi u-Evidence Makgopa eshaya elokulinganisela iBaroka FC ngebhola ebelikhahlelwe nguJoslin Kamatuka.
Njengoba benzile emzuliswaneni wokuqala womdlalo e-FNB Stadium, womabili amaqembu azinze ngokulingana futhi abelana ngamaphuzu. Ngemuva kwalokho, uThami Masiya ushaye igoli kwathi uGoodman Mosele walinganisa amaphuzu ngegoli lakhe.
Umqeqeshi weChiefs, uGavin Hunt ukhala ngabaphethe abaqala ukubancisha amaphenalthi amabili bebhekene neStellenbosch manje sekuyiphenalthi eyodwa neBaroka.
“Uma sithola iphenalthi ngesiwombe sokuqala, kuyasiza lokho futhi besingasitholi lesi sinqumo,” kusho umphathi.
“Lokhu sekwenzeke cishe emidlalweni emibili noma emithathu ilandelana futhi kuyaphoxa kakhulu ngoba isinika umfutho omncane.” engeza.